Mayelana NATHI | I-Meetion Gaming Peripherals kanye ne-Office PC Accessories Brand
Vumela wonke umuntu ajabulele ubumnandi bemidlalo.
I-MeeTion brand, eyasungulwa ngokusemthethweni ngo-Ephreli 2013, iyinkampani egxile kumakhibhodi asebenza phakathi nendawo kuya phezulu, amagundane wokudlala, nezinsimbi zomngcele ze-e-Sport.
"Wonke umuntu makajabulele ubumnandi bemidlalo" ngumbono weMeTTion. bebelokhu besebenza kanzima ukusiza abadlali begeyimu emhlabeni jikelele ukuthuthukisa ikhibhodi yokudlala nesipiliyoni segundane. Sisungule izinhlangano eziseduze zokubambisana ezifundeni ezahlukahlukene futhi sijulise umugqa wethu womkhiqizo ukwenza uMkhiqizo we-MeeTion endaweni yangakini.
Sigcina ukuxhumana okuvamile nabadlali begeyimu abavela ezifundeni ezahlukahlukene zomhlaba. Okuhlangenwe nakho kwabasebenzisi nezikhalazo mayelana nokukhubazeka komkhiqizo kuyindlela yethu yokwenza imikhiqizo emisha. Sifuna njalo izindlela ezintsha zokuqamba nokusebenzisa ubuchwepheshe obusha nezinto zokwakha emikhiqizweni yethu ukwenza abasebenzisi bethu babone isipiliyoni esisha esilethwa ubuchwepheshe obusha nezinto zokwakha kusenesikhathi.
Kusukela yasungulwa, iMeeTion Tech igcine izinga lokukhula okumangazayo embonini. IMeeTion Tech ithengise ama-keyboard ayizigidi ezingama-2.22 namagundane ngo-2016, ama-keyboard ayizigidi ezingu-5.6 namagundane ngo-2017, namakhibhodi ayizigidi eziyi-8.36 namagundane ngo-2019.
I-logo kaMeeTion ivela ku- "Xunzi · Emperors": abalimi banamandla kodwa abakwazi ukwenza kahle. Ngemuva kwalokho, ngokusebenzisa izimo zezulu, ezendawo, nezabantu, bangenza konke. Umqondo wayo ukunikeza ukudlala okweqile ezimweni zezulu, ezendawo, nezabantu ukwakha umqondo wokusebenza ovulekile, ofaka hlangana, wokubambisana nowokuwina. NgoMashi 15, 2016, iMeeTion yenza ukuthuthuka kwamasu ku-ecosystem, ngaleyo ndlela ikhuthaza ukwakhiwa kwe-eco-chain ngaphandle kwama-e-games kanye nabalingani embonini.
Sizibophezele ekukhiqizeni imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamanani okuncintisana kakhulu. Ngakho-ke, simema ngobuqotho zonke izinkampani ezinentshisekelo ukuthi zisithinte ukuthola eminye imininingwane.
Ikheli: Isakhiwo 2, iHengchangrong High-tech Park, iHuangtian, iXixiang Street, Isifunda saseBao'an, iShenzhen, iGuangdong, China.